कुखुराको मासु अभाव हुन थाल्यो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कुखुराको मासु अभाव हुन थाल्यो
आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९ मा प्रकाशित !
इनरुवा, वैशाख १७ गते । सुनसरीका विभन्न स्थानमा कुखुराको चल्ला र मासुको अभाव भएको छ । समयमै चल्ला उत्पादन नभएकाले जिल्लामै ब्रोइलर कुखुराको मासुको अभाव भएको हो । बजारमा विगत केही दिनदेखि बजारमा ब्रोइलर कुखुराको मासुको अभाव भएको उपभोक्ताले बताएका छन् । अन्यत्रबाट पनि कुखुरा नआएकाले मासुको मूल्य २२० रुपियाँबाट बढेर ३२० रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ ।
यसरी प्रतिकेजीमा एक सय रुपियाँ मूल्य बढे पनि बजारमा माग अनुसारको कुखुरा आपूर्ति हुन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् । इनरुवाका युवाले सञ्चालन गरेको साझा पोल्ट्री फार्मका सञ्चालक प्रेमचन्द्र ढुङ्गेलका अनुसार कुखुराको चल्लाको मूल्य अकासिएको र माग गरेजति परिमाणमा उपलब्ध नहुने गरेका कारण किसानले समयमै नयाँ चल्ला फार्ममा राख्न नपाउँदा अहिले बजारमा खानयोग्य कुखुराको अभाव सिर्जना भएको हो ।
उहाँले चल्ला हालेको ४५ दिनमा खानयोग्य हुनेमा ४५ दिनअघि जिल्लामा देखिएको बर्डफ्लुको कारण बाहिरबाट चल्ला ल्याउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको कडाइ, चल्लाको मूल्य ६० रुपियाँको हाराहारीबाट एक सय रुपियाँ नाघेको र त्यसमा पनि माग अनुसार उपलब्ध नभएको कारण जिल्लाका अधिकांश किसानले चल्ला समयमा हाल्न नपाएकोले अहिले बजारमा खानयोग्य कुखुराको अभाव भएको बताउनुभयो । बजारमा कुखुरा र चल्ला अभाव हुँदा मासु नपाएको उपभोक्ताले बताएका छन् ।
यसैबीच सुनसरीको सीमावर्ती क्षेत्रमा कुखुराको चल्ला र जिउँदो कुखुराको तस्करी बढेको छ । नेपाली बजारमा कुखुरा अभाव भएको मौकामा सीमा क्षेत्रका प्रहरीको संरक्षणमा एक महिनायता भारतीय बजारबाट अवैध रूपमा कुखुरा भिœयाइने गरेको छ ।
सीमामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले कुखुरा र चल्ला अवैध रूपमा भित्रिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
सीमामा रहेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले भने कुखुरा र चल्ला अवैध रूपमा भित्रिरहेको सूचना आएसम्म नियन्त्रणमा लिएको र नजराना असुली नगरेको दाबी गरेका छन् । स्थानीयले भने जिल्लामा वैध बाटोबाट आउने कुखुराभन्दा तस्करबाट मोटो रकम नजराना लिएर ब्रोईलर कुखुरा भित्रिने गरेको दाबी गरेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: लाखाैंकाे आम्दानी तरकारी खेतीबाट लौ हेर्नुस
NEXT POST Next post: राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदद्वारा निन्दा भयो
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख १७, २०७४ ११:२९